Guddoomiyaha Gobolka Bay Oo Kormeeray Mashaariicyo Beydhabo Ay Ka Wado Hey’adda DDG – Radio Muqdisho
Kormeerkani maanta magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Bay uu ka sameeyay Guddoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosow ayaa waxa uu ugu kuurgalayay mashaariicda magaalada iyo deegaannada ku dhow ay ka wado Hey’adda DDG.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosoow oo ay wehliyaan xubno ka tirsan maamulka ayaa kormeerka ay ku sameeyeen mashaariicda ay ka wado halkaasi hay’adda DDG ugu kuur galayay sida ay u socdaan mashaariicda.
Madaxa hey’adda DDG ee Baydhabo Aadan Saciid ayaa warbixinno ka siiyay mas’uuliyiint maamulka gobolka howlaha ay wadaan, isagoo sheegay in meel wanaagsan ay marayaan ceelal ay ka qodayeen deegaannada ku dhow Beydhabo.
Aadan Saciid ayaa sheegay in Mashaariicda ay yihiin kuwo qayb ka ah qorshayaasha ay ku doonayaan inay caawiyaan shacabka ku nool magaalada Baydhabo iyo daafaheeda, isagoo sheegay in mashaariicda ay ka mid yihiin sidii ay shacabku u heli lahaayeen biyo ay cabaan oo nadiif ah.
Guddoomiyaha Gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosoow ayaa sheegay in mashaariicdaas ay ka mid yihiin kuwo lagu dhisay iskuullo, ceelal, nalalka waddooyinka la suro ee cad-ceedda ku shaqeeya iyo dhismaha xafiisyada dowladda oo uu tilmaamay in uu ku ammaanayo.